itemplate yesicwangciso sovavanyo lokusebenza
Eyona Ukusebenza Uvavanyo lweNtsebenzo yeTemplate
Uvavanyo lweNtsebenzo yeTemplate
Ithemplate yesicwangciso sokuvavanywa kokusebenza enokusetyenziswa njengoko injalo okanye eguqulweyo ukulungiselela iimfuno zeprojekthi yakho ngokweemfuno zomsebenzi.
Injongo yeli candelo kukubonelela ngesishwankathelo esikwinqanaba eliphezulu lendlela yokuvavanywa kokusebenza ekufuneka ilandelwe iprojekthi. Oku makwaziswe kubo bonke abathathi-nxaxheba abachaphazelekayo kwaye kufuneka kuxoxwe ngako ukuze kufunyanwe imvumelwano.
Njengenxalenye yokuhanjiswa kwe , kuyadingeka ukuba isisombululo sihlangabezane neenqobo zokwamkelwa, kokubini ngokweendawo ezisebenzayo nezingasebenziyo. Injongo yolu xwebhu kukubonelela ngesishwankathelo sovavanyo olungasebenziyo | isisombululo.
Olu xwebhu lubandakanya oku kulandelayo:
Ukungena kunye neKhrayitheriya yokuPhuma
IVolumu kunye nendlela yoVavanyo lweNtsebenzo
Imisebenzi yokuVavanywa kokuSebenza
3. Iikhrayitheriya zokuNgena
Ezi zinto zomsebenzi zilandelayo kufuneka zigqitywe / kuvunyelwane ngazo kwangaphambili ukwenzela ukuba kuqhutyekwe neyona misebenzi yovavanyo lwentsebenzo:
Uxwebhu lweemfuno zovavanyo olungasebenziyo olunikezwe ngu , kunye neeNFR ezinamanani apho kunokwenzeka
Amatyala okusetyenziswa okubalulekileyo kufuneka avavanywe ngokusebenzayo kwaye ngaphandle kwazo naziphi na iibhugi ezibalulekileyo ezivelelayo
Uyilo lweMizobo yoyilo evunyiweyo kwaye iyafumaneka
Amatyala osetyenziso aphambili achaziwe kwaye avavanywa
Iindidi zovavanyo lwentsebenzo ekuvunyelwene ngazo
Layisha ukuseta iiinaliti
Naluphi na ukuseta idatha kuyadingeka - umz. Inani elifanelekileyo labasebenzisi elenziwe kwi
4. Phuma kwiikhrayitheriya
Umsebenzi wovavanyo lomsebenzi uza kugqitywa xa:
Iithagethi zeNFR zifezekisiwe kwaye iziphumo zovavanyo lwentsebenzo zithiwe thaca kwiqela kwaye zavunywa.
5. Iimfuno zokusingqongileyo
Iimvavanyo zentsebenzo ziya kuqhutywa ngokuchasene nohlobo oluzinzileyo lwe isisombululo (esele sidlulile kuvavanyo olusebenzayo) kwaye senziwa kwimeko ezinikezelweyo yemveliso (pre-prod?) eyabelwe uvavanyo lwentsebenzo ngaphandle kokuthunyelwa kuloo meko ngexesha lokuvavanywa kokusebenza.
Kuya kubakho enye okanye ezingaphezulu ezinikezelweyo 'umthwalo wokufaka' ukumisela umthwalo ofunekayo wovavanyo lwentsebenzo. Inaliti yokulayisha ingaba yi-VM okanye ii-VMs ezininzi ezinomzekelo we-JMeter esebenzayo, eqala izicelo.
5.2 Izixhobo zovavanyo
Izixhobo zovavanyo ezisetyenziselwa uMthamo kunye nokuvavanywa kokuSebenza ziya kuba:
Isixhobo sokuvavanya umthwalo ovulekileyo. Isetyenziswa ikakhulu kumthamo kunye nokuvavanywa kokusebenza.
I-Splunk iya kusetyenziselwa ukungena (inokusebenzisa esinye isixhobo-kufuneka uqinisekise ngeqela lovavanyo lwe-perf).
6. IVolumu kunye nendlela yoVavanyo lweNtsebenzo
I Isisombululo kufuneka sisebenze ngokwaneleyo ukulawula ezi ndlela zokulayisha zilandelayo.
QAPHELA Amanani akule theyibhile alandelayo ngawesampulu kuphela-amaxabiso okwenyani kufuneka afakwe kwakugqitywa nge Uxwebhu lweNFR.
6.1 Iivolumu zeenkonzo ekujoliswe kuzo
Iithagethi zeyure zifunyenwe kwisisombululo sangoku se- [Y2019]. Kususwe amanye amaxabiso 'omzekelo' kwitemplate yesicwangciso.
Kuba amaxabiso aphakamileyo ngeyure awaphakamanga, aya kuthathwa njengelithagethi kuvavanyo lomthwalo osisigxina. Ukulinganisa into yi-TBD ngoku.
Uvavanyo lwentsebenzo luya kusebenza ngabasebenzisi abali-1000 [?]. Abasebenzisi baya kwenziwa kwi kwangaphambili kwaye ufikeleleke nge Ukungena kwi-API. Isicelo ngasinye siya kungena nge-userID eyahlukileyo.
Isixhobo seJMeter siya kusetyenziselwa ukwenza izikripthi zokuvavanya ukusebenza. Ngaphakathi kweencwadi zeempendulo, kuya kubakho amabango axeliweyo ukujonga le metriki ingentla kunye nokuhlolwa kokusebenza okuyisiseko ukuqinisekisa ukuba iimpendulo ezichanekileyo zifunyenwe kwisicelo ngasinye.
6.4 Iiprofayili zokulayisha
Iiprofayili zomthwalo kufuneka ziyilelwe ukulinganisa itrafikhi yosuku oluqhelekileyo eliqhelekileyo ukuya indawo. Nceda uqaphele ukuba ukugcwala kwabantu kwahlulwe kuphela kwaye kuthintelwe kwinxalenye yesazisi saBathengi kunye noLawulo lokuFikelela kwindawo, okt.
Phinda umisele iphasiwedi
Apha ngezantsi kukho iprofayile yomhla:
Inkqubo yokuqala yesenzo kukufumana isiseko. Sisebenzisa kuphela umsebenzisi omnye, siya kuqhuba ulinganiso kangangexesha elithile (umz.5 imizuzu) ukufumana umndilili wamaxesha okuphendula kwindawo nganye yokuphela. Oku kuqinisekisa ukuba kuphela ngomsebenzisi omnye esinakho ukufikelela kwizicelo zokuphakama ngomzuzwana.
6.4.2 Uvavanyo lomthwalo
Emva kokuba iimethrikhi zokuqala zidityanisiwe, emva koko ukulinganisa okufanayo, okulinganisa iprofayili yomthwalo, kuqhutywa ngenani elonyukayo labasebenzisi ukuvavanya ngokuchasene nomthamo ojolise kuwo. Uluvo lovavanyo lomthwalo kukuvavanya inkqubo ngokuchasene nomthwalo oqhelekileyo wosuku, ukulinganisa iiramp-ups, iincopho zosuku, kunye neeramp-downs.
6.4.3 Ukuvavanywa koxinzelelo
Injongo yovavanyo loxinzelelo kukufumana indawo yokuqhekeka kwenkqubo, okt ngexa elingakanani le nkqubo ingaphenduliyo. Ukuba i-auto-scaling ikhona, uvavanyo loxinzelelo luya kuba sisalathiso esifanelekileyo apho izikali zenkqubo kunye nezixhobo ezitsha zongezwa khona. Ukuvavanya uxinzelelo, ukulinganisa okufanayo okusetyenziselwa uvavanyo lomthwalo kuyasetyenziswa kodwa ngomthwalo ongaphezulu kulindelweyo.
6.4.4 Uvavanyo lwespike
Uvavanyo lwespike luzisa umthwalo obalulekileyo kwinkqubo ngexesha elifutshane. Injongo yolu vavanyo kukulinganisa umcimbi wokuthengisa umzekelo, xa inani elikhulu labasebenzisi ngaxeshanye lingena kwiakhawunti yabo ngexesha elifutshane.
6.4.5 Uvavanyo olunyanzelekileyo
Ukuvavanywa kokuntywila kuya kuqhuba uvavanyo lomthwalo ixesha elide. Injongo ukuveza nakuphi na ukuvuza kwenkumbulo kunye nokungaphenduli okanye iimpazamo ngexesha lovavanyo lokuntywila. Singahlala sisebenzisa i-80% yomthwalo (esetyenziselwa ukuvavanywa komthwalo) kwi-24hrs, kunye / okanye i-60% yomthwalo kwi-48hrs.
6.4.6 Ukuvavanywa kwendawo yokugcwala
Kuvavanyo lwendawo yokugcwala siqhubeka nokwandisa umthwalo ngokuthe chu ukufumanisa ukuba yeyiphi inkqubo engaphenduliyo, okt ukufumana indawo yokophuka kwenkqubo ngokomthwalo.
7. Imisebenzi yokuvavanywa kokusebenza
Kucetyiswa ukuba kulandelwe le misebenzi ilandelayo ukuze kugqitywe uVavanyo lweNtsebenzo:
7.1 Ukwenziwa koVavanyo lweNdawo yokuSebenza
Inaliti zomthwalo kufuneka zibe namandla ngokwaneleyo kwaye kufuneka zilawulwe kude. Kwakhona, indawo ekuhlatywa kuyo izitofu kufuneka kuvunyelwene ngayo
Ukujonga ixesha lokwenyani kunye neendlela zokulumkisa kufuneka zibekhona kwaye kufuneka zigubungele usetyenziso, iiseva kunye neenaliti zomthwalo.
Iigodo zesicelo kufuneka zifikeleleke.
7.2 Sebenzisa i-Case Scrip
Isixhobo sokuvavanya ukusebenza esiza kusetyenziswa yiJMeter
Naziphi na iimfuno zedatha kuxoxwe ngazo malunga neemeko zokusetyenziswa ukuba zibhalwe
7.3 Imeko yoVavanyo yokwakha
Uhlobo lovavanyo oluza kwenziwa (Umthwalo / uxinzelelo njl.njl.
Iprofayili yomthwalo / imodeli yomthwalo kufuneka kuvunyelwene ngayo kuhlobo ngalunye lovavanyo (ukunyuka / ukuhla, amanyathelo njl.
Faka ixesha lokucinga kwiimeko
7.4 Ukuphunyezwa kovavanyo nohlalutyo
Ezi mvavanyo zilandelayo kufuneka zenziwe ngolu hlobo lulandelayo:
Uvavanyo lweNdawo yokuHanjiswa
Ngokufanelekileyo, ukuvavanywa oku-2 kohlobo ngalunye lovavanyo kuya kwenziwa. Emva kovavanyo ngalunye oluqhutywa isicelo sinokulungiswa kakuhle ukuze sandise ukusebenza kwayo kwaye omnye umjikelo wovavanyo uya kuqala.
7.5 Uhlalutyo lwasemva kovavanyo kunye nengxelo
Thatha kwaye ugcine zonke iingxelo zedatha ezifanelekileyo kunye noovimba.
Chonga impumelelo okanye ukusilela ngokuthelekisa iziphumo zovavanyo neethagethi zentsebenzo. Ukuba iithagethi azifezekiswanga kufuneka kwenziwe utshintsho olufanelekileyo emva koko kuqale omnye umjikelo wokwenza uvavanyo. Akukaziwa ukuba mingaphi imijikelezo yokuphumeza eya kufuneka ukuze kuhlangatyezwane neethagethi ekuvunyelwene ngazo.
Bhala uxwebhu kwaye unike iziphumo kwiqela lakho.
I-Samsung Galaxy Note 20 entsha ayinayo indawo yokubeka ikhadi le-MicroSD
UGoogle wongeza izitshixo 'zokutshixa isikrini' kwinguqulelo ye-Android yoMncedisi